हवाई WIC | JPMA, Inc.
यहाँ सुरू गर्नुहोस्!
हामी तपाईंलाई र तपाईंको परिवारलाई हवाई WIC कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौं। कृपया तपाईंको स्थानीय WIC क्लिनिक कल गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन्। के तपाईंलाई WICShopper अनुप्रयोगसँग समस्या छ? ईमेल JPMA मा WICShopper@jpma.com
तपाईं WIC मा नयाँ हुनुहुन्छ? कृपया तल हवाई WIC ओरिएन्टेशन भिडियो हेर्नुहोस्!
सुझावहरू र अकसर गरे
WIC Q & A
Q: के मैले मेरा सबै WIC फूडहरू किन्नु पर्छ?
A: होईन, तपाईंलाई प्रदान गरिएको WIC का सबै खाद्यहरू खरीद गर्न आवश्यक पर्दैन।
Q: के म अन्य खानाको साथ प्रयोग गरेन खानाहरू बदल्न सक्छु?
A: केहि विकल्पहरूको लागि केही खाद्य पदार्थहरूको लागि अनुमति दिइन्छ। तपाईको WIC क्लिनिकमा तपाईका विकल्पहरू छलफल गर्न र तपाईको चेक वा बेनिफिटहरू परिवर्तन गर्न सम्पर्क गर्नुहोस्। स्टोरमा कुनै प्रतिस्थापन गर्न सकिदैन। तपाईंले चेक वा बेनिफिटहरूको सूचीमा छापिएको कुरा तपाईंले पाउनु पर्छ यदि तपाईं आफ्नो WIC चेक वा eWIC कार्ड प्रयोग गरेर त्यो खाना किन्नुहुन्छ भने।
Q: के म मेरो परिवारको अन्य सदस्यहरु लाई मेरो WIC फूड्स वा मेरो बच्चाको WIC खाना खान्छु?
A: WIC फूडहरू कार्यक्रममा भाग लिने व्यक्तिको लागि मात्र हो। यदि तपाईंको घरमा WIC चेक वा सुविधाहरू प्राप्त गर्नेहरूले निश्चित WIC- प्रदान गरिएको खाना खाँदैनन् भने, तपाईंको क्लिनिक स्टाफलाई सोध्नुहोस् यदि त्यहाँ कुनै मान्य प्रतिस्थापन छ वा तिनीहरूलाई तपाईंको चेक वा सुविधाहरूबाट हटाउनुहोस्।
Q: के मेरो प्रयोगहरू अर्को महिनामा रोल गर्दछन् भने तिनीहरूले प्रयोग गरेन भने?
A: नहीं। कुनै पनि WIC खाद्य लाभ खरीदा नहीं कि त्यो महिना अर्को महिना सम्म नहीं ले जाएगा।
Q: तपाईं मलाई स्तनपानको बारेमा के भन्न सक्नुहुन्छ?
A: स्तनपान भनेको आफू र आफ्नो बच्चाको लागि गर्न सक्ने एक उत्तम चीज हो। आमाहरूलाई स्तनपानको बारेमा धेरै प्रश्नहरू छन् वा अतिरिक्त समर्थन आवश्यक पर्दछ। ठिकै छ! WIC मद्दतको लागि यहाँ छ। तपाईंको स्थानीय WIC अफिसमा स्तनपान विशेषज्ञहरू छन् जसले तपाईंको प्रश्नहरूको जवाफ दिन मद्दत गर्दछ र सेवाहरू प्रदान गर्दछ जसले तपाईंलाई तपाईंको स्तनपान लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्दछ। केवल सोध्नुहोस्!
यहाँ केहि थप छ iजन्मजात र संसाधनहरू काममा वा स्कूल फर्के पछि तपाईंलाई स्तनपान गराउन मद्दतको लागि।
Q: के म WIC मा जैविक खाना पाउन सक्छु?
A: हो, त्यहाँ धेरै WIC- अनुमोदित खाद्य पदार्थहरू छन् कि जैविक विकल्पहरू छन्। जैविक विकल्पहरू बच्चा खानेकुरा फलफूल र तरकारीहरूका लागि समावेश गरिएका हुन्छन्; ताजा, फ्रिज र क्यान्ड फल र तरकारीहरू, सोमिलक, टोफू, सम्पूर्ण गहुँ पास्ता, र क्यान्ड गेडाहरू। विशिष्ट ब्रान्ड र प्रकारहरूको लागि, कृपया WIC स्वीकृत खाद्य सूचीमा हेर्नुहोस्।
Q: के म शिशुको WIC सुविधाहरूसँग शिशु धान धान्य किन्न सक्छु?
A: सं शिशु चामल अनाज आर्सेनिकको स्तरका कारण अनुमोदित डब्ल्यूआईसी खाना होईन जुन केही शिशु धान धान्य उत्पादनहरूमा फेला पर्‍यो। यदि तपाइँ तपाइँको WIC बेनिफिटहरूको अंशको रूपमा शिशु अनाज छ भने, तपाइँ शिशु दलिया, मल्टीग्रेन, सम्पूर्ण गहुँ, र जौको अन्नफल छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा अधिक जान्नको लागि, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
WIC क्लिनिक फेला पार्नुहोस्
प्रयोग गर्नुहोस् "WIC कार्यालय खोज्नुहोस्"WICShopper अनुप्रयोगमा बटन। तपाईं आफ्नो क्लिनिकमा दिशा निर्देशन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूलाई एपबाट दाँया कल गर्न सक्नुहुन्छ।
WIC पसल खोज्नुहोस्
प्रयोग गर्नुहोस् "WIC पसलहरू"WICShopper अनुप्रयोगमा बटन
स्टोरमा तपाइँको WIC चेक वा eWIC कार्ड ल्याउन नबिर्सनुहोस्!
WICShopper अनुप्रयोगमा स्क्यान उत्पादनहरू सुनिश्चित गर्नका लागि तिनीहरू WIC योग्य छन्। उत्पाद खरीद गर्नका लागि तपाईंसँग लाभ छ भनेर प्रमाणित गर्न सम्झनुहोस्!
WICShopper (वा तपाइँको छापिएको संस्करण) मा तपाइँको हवाई WIC स्वीकृत फूड सूची प्रयोग गर्नुहोस् तपाइँले किन्न सक्नुहुने WIC फूडहरू हेर्नका लागि।
स्टोर ब्रान्ड किन्नुहोस्, बिक्री र विशेषको लागि पसल, र निर्माता र पसल कूपन प्रयोग गर्नुहोस्।
Q: मैले केहि फूडहरू स्क्यान गरे वा UPC नम्बरमा प्रविष्ट गरेको कुञ्जी र केहि फरक सन्देशहरू देख्न सक्दछु। उनीहरूको के मतलब छ?
अनुमति दिइयो - यो आईटमहरू WIC को लागि अनुमति छ र तपाईंसँग यस आईटमलाई खरीद गर्न WIC फाइदाहरू छन्!
कुनै योग्य लाभहरू छैनन् - यो एक WIC योग्य आइटम हो, यद्यपि तपाईंसँग लाभ खरीद गर्न यो उपलब्ध छैन। या त तपाईंलाई यो वस्तुको लागि बेवास्ता गरिएको थिएन, वा तपाईंसँग यो खरीद गर्न पर्याप्त बाँकी फाइदाहरू छैन।
एक विक आईटम छैन - यसको अर्थ WIC ले यस वस्तुलाई स्वीकृत गरेको छैन। यदि तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईं यस खानालाई WIC खाद्य फायदाहरूसँग प्रयोग गर्न सक्षम हुनुपर्दछ "मलाई यो खरीद गर्न सकेन!" [HC (3] यो अनुप्रयोगमा अवस्थित प्रयोग गरेर।
पहिचान गर्न असमर्थ - यसको मतलब आइटम फूड लिस्टमा छैन तर हामी WICShopper होस्टमा जडान गर्न सक्षम भएनौं यदि यो पछिल्लो केही दिनमा थपियो कि भनेर। धेरै जसो सम्भवतः यो WIC योग्य वस्तु होईन।
Q: मैले ताजा फल र सब्जिहरु स्क्यान गर्न खोजे। या त तिनीहरू स्क्यान छैन वा तिनीहरू अनुमति नभएसम्म आउँदैनन्। किन?
A: धेरै जसो केसहरूमा, WICShopper ले ताजा फलफूल र तरकारीहरू स्क्यान गर्न सक्दैन र कहिलेकाँही स्टोरहरूले आफ्नै प्याकेजि use प्रयोग गर्दछ जुन अनुमोदित उत्पादनहरूको सूचीमा नहोस्। यद्यपि सबै पूरै, प्रि-कट, काटिएको वा व्यक्तिगत सेवा आकारहरू सॉस वा डिपहरू बिना अनुमति छ। त्यहाँ केहि अन्य नियमहरू छन्, त्यसैले थप विवरणहरूको लागि अनुप्रयोगमा तपाईंको खाना सूची हेर्नुहोस्।
म यो खरीद गर्न सकेन!
Q: जब म प्रयोग गर्दछु, "मैले यो खरीद गर्न सकेन"? र के यो छ?
A: "मैले यो खरीद गर्न सकेन!"तपाइँ WIC लाई बताउन दिनुहुन्छ जब तपाइँ किन्न खोज्नु भएको खाद्यान्न वस्तु रेजिस्टरमा अस्वीकृत हुन्छ। जब तपाईं प्रयोग गर्नुहुन्छ, "मैले यो खरीद गर्न सकेन!" WICShopper अनुप्रयोगमा, हामी राज्य WIC कार्यालयमा सूचना प्राप्त गर्नेछौं। हामी तपाईले हामीलाई बताउनु भएको सबै चीजहरू समीक्षा गर्दछौं र स्टोरहरूलाई काम गर्नको लागि अनुमति दिइएका खाद्य पदार्थहरू उपलब्ध गराउँदछौं।
अनुमोदित खाद्य सूची
अंग्रेजी खाद्य सूची
WIC अधिकार र उत्तरदायित्व
अधिकार र जिम्मेवारी
हामी तपाईंलाई WIC मा आज हेर्न उत्साहित छौं र तपाईंलाई सहयोग गर्न खुसी छ!
मलाई अधिकार छ:
स्वस्थ खानाहरू खरीद गर्न जाँच पाउनुहोस्। मलाई थाहा छ WIC ले मलाई आवश्यक सबै खाना प्रदान गर्दैन।
स्वस्थ खाने र सक्रिय जीवन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
स्तनपान संग सहयोग प्राप्त र सहयोग प्राप्त गर्नुहोस्।
प्रतिरक्षा र अन्य स्वास्थ्य सेवाहरूमा जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् जुन मलाई मद्दत गर्न सक्छ।
WIC कर्मचारी र पसलका कर्मचारीहरूसँग उचित र सम्मानजनक उपचार। यदि मैले उचित व्यवहार गरेन भने, म WIC पर्यवेक्षकसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि म मेरो पात्रताको बारेमा निर्णयहरूसँग सहमत छैन भने म एक सम्मेलन वा सुनुवाईको लागि WIC निर्देशक वा राज्य WIC कार्यालयलाई सोध्न सक्छु।
नागरिक अधिकार सुरक्षा। WIC कार्यक्रम पात्रता स्तरहरू दौड, रङ, राष्ट्रिय मूल, यौन, उमेर वा अक्षमताको बावजूद सबैको लागि समान हो।
गोपनीयता। WIC को गोपनीयता नीति यस फारमको पछाडिमा पाइन्छ।
म सत्य र पूर्ण जानकारीको बारेमा सहमत छु:
मेरो आय। म मेरो परिवारको सबै आय स्रोतको बारेमा कर्मचारीलाई भन्नेछु। म कुनै पनि परिवर्तन रिपोर्ट गर्नेछु।
मेडिकाइड, खाद्य टिकटहरू (SNAP), वा पारिवारिक रोजगारी कार्यक्रम (TANF) मा मेरो सहभागिता। म WIC लाई थाहा दिनेछु कि यदि मैले एक कार्यक्रममा भाग लिन रोक्यो जसले मलाई WIC को लागि योग्य बनायो।
मेरो स्तनपान स्थिति। यदि म स्तनपान कम गर्न वा रोक्न WIC लाई सूचित गर्नेछु।
मेरो गर्भावस्था अवस्था।
मेरो ठेगाना। म मेरो ठेगाना वा सम्पर्क जानकारीमा परिवर्तनहरू रिपोर्ट गर्नेछु। म राज्यबाट बाहिर जाने क्रममा प्रमाणीकरण प्रमाणिकरण (VOC) को लागि सोध्न सक्छु। यो नयाँ राज्यमा WIC मार्फत सजिलो बनाउनेछ।
म नियमहरू पछ्याउन सहमत छु। म:
क्लिनिक स्टाफ व्यवहार गर्नुहोस् र सम्मानको साथ कर्मचारीहरु भण्डार गर्नुहोस्। म कसम खाँदैन, चिन्ता, कसैलाई धम्की दिनुहुन्छ वा हानि।
जसको नाम चेकमा छ मात्र व्यक्तिको लागि मेरो WIC फूडहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
अतिरिक्त खानाहरू फर्काउनुहोस् जुन मैले क्लिनिकमा प्रयोग गर्न सक्दिनँ।
कहिलेकाहीँ मेरो WIC फूडहरू वा जाँचहरू बेच्न, टाँस्नुहोस् वा व्यापार गर्न प्रस्ताव गर्नुहोस्। यसमा उनीहरूलाई अनलाइन पोष्ट गर्दै, वा भण्डारमा तिनीहरूलाई फर्काउँछ। कुनै पनि खाना म बिक्री गर्न प्रस्ताव गर्दछु वा दिईएको WIC खानाको रूपमा उस्तै दिइनेछ WIC खाना हुन मानिन्छ। म खानाको लागि कार्यक्रम फिर्ता तिर्न आग्रह गर्नेछु।
चेकमा मुद्रित सही महिनामा मेरो चेक प्रयोग गर्नुहोस्।
प्रत्येक महिना केवल एक WIC क्लिनिकबाट जाँच पाउनुहोस्। मलाई बुझ्छ कि दोहोरो साझेदारी गैरकानूनी छ।
मेरो नियुक्तिहरू राख्नुहोस् वा पुन: अनुसूची गर्न क्लिनिकलाई कल गर्नुहोस्। मैले बुझें कि म यो प्रोग्राम ले जाऊँगा यदि म एक पंक्ति मा दुई महिना को लागी मेरो चेक नहीं उठाओ।
जब मेरो क्लिनिकमा जान्छ वा स्टोरमा WIC जाँचहरू खर्च गर्दा मेरो साथ मेरो WIC आईडी प्याकेट ल्याउनुहोस्।
मेरो WIC जाँचहरू नकदी जस्ता सुरक्षित राख्नुहोस्, तिनीहरूलाई गुमाउनु, चोरी वा नष्ट।
यदि मेरो चेक गुमाए वा चोरी भए पनि WIC कर्मचारीलाई भन्नुहोस्। म हराएको रूपमा मैले रिपोर्ट गरेको चेकहरू प्रयोग गर्दिनँ।
मेरो चेकमा र हवाई डब्लुआईसी प्राधिकृत फूड्स बुकलेटमा सूचीबद्ध खाद्य पदार्थहरू मात्र खरीद गर्नुहोस्।
मेरो चेकहरूमा कुनै पनि परिवर्तनहरू बनाउँदैन।
सही खरिद मूल्य पछि मेरो चेकहरू साइन इन गरेर क्याशियर द्वारा भरिएको छ।
हवाई WIC अधिकृत फूड्स पुस्तिकामा नियम र निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
मैले पढेको वा मेरो अधिकार र जिम्मेवारीहरू (अगाडि प्रिन्ट गरिएको) पढेको छु। मलाई थाहा छ कि यदि म यी जिम्मेवारीहरू पछ्याउँदैन भने, मलाई फायदाको लागि फर्कन अनुरोध गर्न सकिन्छ वा मेरो वा मेरा छोराछोरीले WIC कार्यक्रमलाई हटाउन सक्छ।
यो प्रमाणीकरण संघीय कोषको उपयोगको साथ बनाइयो। म प्रमाणित गर्दछु कि मैले दिएको जानकारी मेरो ज्ञानको राम्रोसँग सही छ। प्रोग्राम कर्मचारीले मैले सबै क्लिनिकमा दिएको जानकारी जाँच गर्न सक्दिन। मलाई थाहा छ कि कुनै पनि गलत दाबी भन्ने कुरा भनिन्छ वा जान्नाले खाद्य लाभहरू प्राप्त गर्नका लागि गरिन्छ (उदाहरणका लागि: गलत वा भ्रामक बयान गर्ने वा गलत छान्ने, लुकाउने, वा हक अधिकार जस्ता तथ्यहरू) मलाई खानाको मूल्यको लागि राज्य एजेन्सी तिर्न सक्छ मलाई अनुचित रूपमा दिइयो, र राज्य र संघीय कानून अन्तर्गत मलाई नागरिक वा आपराधिक प्रति अभियोगमा विषय गर्न सक्छ।
यदि मैले एक प्रोक्सी नामकरण गर्न रोजेको छु भने, उसले / मेरो लागि मेरो WIC जाँचहरू लिन सक्छ र छुटाउन सक्छ। मेरो प्रोक्सीले मेरो बच्चा / बच्चाहरूलाई पनि क्लिनिकमा ल्याउन सक्छ यदि उनीहरूको उचाई र वजन जाँच गरी, र / वा रक्तको लोहेको लागि खरिद गर्ने अपग्रेड भ्रमणहरू आवश्यक पर्दछ। म बुझ्छु कि म मेरो प्रोक्सीको कार्यहरूको लागि जिम्मेवार छु। मैले मेरो प्रक्सी तिनीहरूलाई दिएका कुनै जानकारी वा अधिसूचनाहरूका लागि सोध्नै पर्छ। मैले बुझें कि म, सहकर्मी, वा एक अतिरिक्त अनुमोदन जसले मैले नाम राखेको छु, प्रमाणिकरण नियुक्तिमा अवस्थित हुनुपर्दछ।
WIC गोपनीयता नीति:
WIC ले तपाइँको गोपनीयतामा अधिकारको सम्मान गर्दछ। WIC सहभागीको रूपमा, तपाईं रिमाइन्डर पाठ सन्देशहरू, फोन कलहरू, पत्रहरू, पोष्टकार्डहरू, वा ईमेलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं यी रिमाइन्डरहरू प्राप्त नगर्न अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।
WIC कार्यक्रममा तपाईको सहभागिताको बारेमा जानकारी गैर- WIC उद्देश्यहरूको लागि अन्य स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रमहरूसँग साझेदारी गर्न सकिन्छ जुन WIC कार्यक्रमको लागि योग्य व्यक्तिहरूको सेवा गर्दछ। हवाई विभागको कार्यकारी निर्देशकले केहि कार्यक्रमहरुमा गोप्य WIC जानकारीको प्रकटीकरण र प्रयोग प्राधिकृत गरेको छ कि तपाई तिनीहरूको सेवाहरुका लागि योग्य हुनुहुन्छ कि छैन भनेर हेर्नका लागि; प्रचार गर्न; तपाईं पहिल्यै भाग लिइरहनु भएको कार्यक्रमहरूसँग आवश्यक स्वास्थ्य जानकारी साझा गर्न; कार्यक्रमहरू बीच प्रशासनिक प्रक्रियाहरू सुव्यवस्थित गर्न; र रिपोर्ट र अध्ययन को माध्यम बाट हवाई परिवारको समग्र स्वास्थ्य आकलन गर्न सहयोग गर्न। तपाईं यी कार्यक्रमहरूको बारेमा अधिक जानकारीको लागि WIC स्टाफलाई सोध्न सक्नुहुन्छ।
JPMA, Inc. द्वारा बनाइएको | प्रतिलिपि अधिकार २०१२ - २०१ | | सबै अधिकार सुरक्षित।